Blank Cheque ၊ သံယံဇာတ ကျိန်စာနှင့် ရွေးကောက်ပွဲအလွန် လားရာ ~ Htet Aung Kyaw
Blank Cheque ၊ သံယံဇာတ ကျိန်စာနှင့် ရွေးကောက်ပွဲအလွန် လားရာ
2:00 AM Htet Aung Kyaw No comments
October 28, 2015, The Voice Daily.
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကုို Blank Cheque ပေးမိလေသလား
မြန်မာ့ဒီမုိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် နော်ဝေနုိုင်ငံက ဘယ်လုိုကူညီဖေးမပေးနုိုင်မလဲ ‘’How can Norway push for democratic reforms in Myanmar?’’ လုို့ခေါင်းစဉ်ပေးထားတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတခု အောက်တုို ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့က နော်ဝေပါလီမန်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနုိုင်ငံမှာ နုိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖုို့နီးလာတာနဲ့အမျှ နော်ဝေအပါဝင် အနောက်နုိုင်ငံတွေမှာ ဒီလုိုဆွေးနွေးပွဲတွေ ခပ်စိပ်စိပ်ဖြစ်လာတာကို စာဖတ်ပရိတ်သတ် သတိထားမိမှာပါ။
Liberal Party နဲ့ နော်ဝေ-မြန်မာကော်မီတီ NBC တုို့ ပူးတွဲစီစဉ်တဲ့ အဲဒီပွဲမှာ ပါတီ ဒုဥက္ကဌ Ola Elvestuen က အမှာစကားပြောပြီး နုိုင်ငံခြားရေးဌာနမှ Tore Hattrem ၊ ဆုိုရှယ်လစ်ပါတီမှ Bård Vegar Solhjell ၊ နော်ဝေး-မြန်မာကော်မီတီမှ Audun Aagre ၊ နုိုင်ငံရေးတက်ကြွသူဘ၀ကနေ ပညာရှင်ဖြစ်လာသူ (University of California, Berkeley) မှ ကိုမင်းဇင်၊ မွန် လူ့အခွင့် အရေးအဖွဲ့မှ နုိုင်ကဆော့မွန်၊၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအဖွဲ Transparency International မှ တာဝန်ရှိသူတွေက ဆွေး ဆွေးကြပါတယ်။
ပထမ ပုိုင်းဆွေးနွေးသူ သုံးဦးထဲမှာ နုိုင်ငံခြားရေးဌာနမှ Tore Hattrem က နော်ဝေးအစိုးရကနေ မြန်မာ့ဒီမုိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အားသွန်ခွန်စုိုက်ကူညီပေးနေကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် တုိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ၊ အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေတုိုးတက်လာရေးကိစ္စ၊ မကြာခင်ကျင်းပတော့မဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကစ္စ တွေကို ကူညီပေးနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
မကြာသေးခင်က နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့ NCA တနုိုင်ငံလုံးအပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထုိုးပွဲဟာ သိပ် အရေးကြီးပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ရှေ့တဆင့်တက်နုိုင်ဖုို့ ခြေလှမ်းဖြစ်တယ်လုို့ သူကဆုိုပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ နုိုင်ငံသားအားလုံး လွတ်လပ်စွာပါဝင်ခွင့်ရဖုို့တောင်းဆုိုကြောင်းနဲ့ နော်ဝေးက ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာရေးအဖွဲ့လည်း မြန်မာနုိုင်ငံဆီလာဖုို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါဝင် အတုိုက်ခံတွေ၊ တုိုင်းရင်းသားတွေ၊ အစိုးရဖက်က ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး အကူအညီပေးမှုတွေ လုပ်နေကြောင်း ပြောသွားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကုိုမင်းဇင်နဲ့ Solhjell တုို့ကတော့ နော်ဝေးအစိုးရရဲ့ အကူအညီပေးမှုကို မူအရလက်ခံပေမဲ့ အစိုးရဆီ တုိုက် ရုိုက်ပေးတာမျိုး၊ NGO အမည်ခံထားတဲ့ MPC (မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ) လုိုအဖွဲ့တွေကိုပေး တာမျိုး မလုပ်ပဲ လူထုဆီ တုိုက်ရုိုက်ရောက်နုိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှာဖွေပေးကြဖုို့ အကြံပြုပါတယ်။ အကူအညီပေးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနောက်နုိုင်ငံတွေမှာ ကုိုယ်ပုိုင်လုပ်ငန်းစဉ်အတိအကျရှိဖုို့လုိုကြောင်း၊ ပထမ ၅ နှစ်မှာ ဘယ်အတုိုင်းအတာအထိ တုိုးတက်လာရမယ်၊ ပထမ အဆင့်အောင်ပြီးရင် ဒုတိယ အဆင့် ဘယ်လိုအကူအညီတွေ တုိုးပေးမယ် စသဖြင့် တိကျတဲ့စံ သတ်မှတ်ချက်တွေရှိဖုို့လုိုကြောင်း၊ အဲဒီလုို မရှိရင် မြန်မာအစိုးရနဲ့ အစိုးရလက်အောက်ခံ NGO အဖွဲ့ တွေရဲ့ လှည့်ဖျားခြင်း၊ လုိုရာဆွဲခေါ်ခြင်းတွေကို ခံသွားရမှာဖြစ်တယ်လုို့ ကုိုမင်းဇင်ကပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခုချိန်ထိ မြင်နေနရသလောက်ကတော့ အဲဒီလုို စံမှတ်ချက်အတိအကျမရှိပဲ ‘’ယုံလုို့ ကြိုပြီး ပုံအပ်ထား တယ်’’ ဆုိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကုို Blank Cheque ပေးထားသလုိုဖြစ်နေကြောင်း ကုိုမင်းဇင်နဲ့ Solhjell တို့က ခပ်ပြင်းပြင်းဝေ ဖန်ခဲ့ပါတယ်။
NCA နဲ့ သံယံဇာတ ကျိန်စာ
လောဘသားလူတစုလက်ကနေ အများပြည်သူအတွက် ရွှေနုိုင်ငံတော်ဖြစ်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ How can Myanmar become "The Golden Land" for the people (and not foragreedy few)? လုို့ အမည်ပေးထား တဲ့ ဒုတိယ ပုိုင်းဆွေးနွေးမှုကုိုဦးဆောင်သူကတော့ မွန်လူ့အခွင့်အရေးဌာမှ နုိုင်ကဆော့မွန်ဖြစ်ပါတယ်။ "The Golden Land” အဖြစ် လူသိများတဲ့၊ သံယံဇာတပေါကြွယ်ဝတဲ့ နေရာတွေကို ဘယ်သူတွေက ထိမ်းချုပ်ထားသလဲ၊ ရလာတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကုို ဘယ်သူတွေက ဘယ်လုိုခွဲဝေသုံးစွဲနေသလဲဆုိုပြီး သူက မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။
အကျိုးအမြတ်တွေကို အများပြည်သူဆီခွဲဝေမပေးပဲ စစ်ဗုိုလ်တွေနဲ့သူတုို့နဲ့ နီးစပ်တဲ့စီးပွါးရေးသမားတွေက သာ အကျိုးခံ စားနေပုံ၊ စစ်တုိုင်းမှုးတွေ၊ ခရုိုနီတွေ နုိုင်ငံရေးမှာ အရေးပါလာပုံ၊ ပြည်တွင်းစစ် နှစ် ၅၀ ကျော် ကာလ အတွင်း စစ်ဘုရင်တွေ သူဌေးဖြစ်သွားပုံ၊ ဒီလုိုအခြေအနေမျုိုးမှာ နုိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထပ်ဝင် လာမယ်ဆုိုရင် အဲဒီ စစ်ဘုရင်တွေနဲ့ ခေတ်ပျက်သူဌေးတွေကိုသာ အားပေးသလုိုဆက်ဖြစ်သွားပြီး အများပြည်သူအတွက် အကျိုးနည်း တဲ့အပြင် ဒီမုိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုလည်း အထောက်အကူဖြစ်စေဖုို့ မလွယ်လှဘူးလုို့ပြောပါတယ်။
စစ်အစိုးရသြဇာအကြီးမားဆုံးအချိန် ၁၉၉၆ ၀န်းကျင်က မွန်ပြည်နယ်နဲ့ တနသာင်္ရီတုိုင်းနယ်စပ် ကံပေါက်ဒေသ ကမ်းလွန်ပင်ဘယ်ပြင်ဆီ ၀င်လာတဲ့ ရတနာသဘာဝဓာတ်ငွေ့ပုိုက်လုိုင်းစီမံကိန်း အကြောင်းကို ဥပမာပေးပြီး အခု ရခုိုင် ကမ်းလွန်ဆီဝင်လာတဲ့ တရုတ်ရဲ့ပုိုက်လုိုင်းအကြောင်း၊ တခါ နော်ဝေးရဲ့ Stat-Oil ကလည်း မြန်မာနုိုင်ငံဆီ ၀င်လာဖုို့ ပြင်နေပြန်ကြောင်း၊ ထုိုင်းကုပ္ဗဏီတွေကလည်း အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးလုပ်ကာစ တုိုင်းရင်းသားဒေသတွေဆီ ကျောက်မီးသွေးအပါဝင် တခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ၀င်လာနေကြောင်း သူကထောက်ပြပါတယ်။
ဒီလုို နုိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်လာတာဟာ တုိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတုိုးတက်ရေးအတွက် ကောင်းတဲ့အလား အလာလုို့ မူ အရဆုိုနိင်ပေမဲ့ လက်တွေ့မှာတော့ အပစ်ရပ်အဖွဲ့နဲ့ အပစ်မရပ်အဖွဲ့တွေကြား ပြသာနာ တက်လာနုိုင်ကြောင်း၊ အခု တောင် NCA မှာ လက်မှတ်ထုိုးဖုို့ ငြင်းဆုိုခဲ့တဲ့၊ ရခုိုင်-တရုတ် ပုိုက်လုိုင်း လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိနေတဲ့ ရှမ်း-မြောက် အဖွဲ့ SSPP ကုို တပ်မတော်က အကြီးအကျယ်ထုိုးစစ်ဆင် နေကြောင်း၊ မွန်ပြည်သစ်အပါဝင် NCA မှာ လက်မှတ်မထုိုးတဲ့ အခြားအဖွဲ့တွေကိုပါ အဲဒီလုိုထုိုးစစ်ဆင်လာ ရင် နုိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ နုိုင်ငံတကာရဲ့ (MPC) မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာအပေါ် အကူညီပေးမှုတွေဟာ Backfire ဖြစ်ပြီး အများပြည်သူအပေါ် စစ်အစိုးရတင်မက နုိုင်ငံတကာကပါ ဒုက္ခလာပေးသလုို ဖြစ်သွားနုိုင်ကြောင်း နုိုင်ကဆော့မွန်က ဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် နုိုင်ငံတကာအစိုးရတွေဖက်က အကောင်းမြင်နေပေမဲ့ မြန်မာတွေကြား မှာတော့ စိုးရိမ်မှုတွေများစွာရှိနေတယ်လုို့ ကုိုမင်းဇင်ကပြောပါတယ်။ နုိုင်ငံတကာ အစိုးရတွေ၊ အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့တွေဟာ မြန်မာနုိုင်ငံတွင်းက သူတုို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဆင်ပြေမပြေ၊ မြန်မာအစိုးရနဲ့ သူတုို့အဖွဲ့တွေကြား ဆက် ဆံရေး အဆင်ပြေမပြေကုိုသာ အဓိကဦးတည်ကြည့်ရှုနေပြီး နုိုင်ငံသားအများစုကြီးရဲ့ အခြေအနေ၊ စိတ်ခံစားချက် တွေကို အသေအချာလေ့လာဖုို့ မေ့လျော့နေကြတယ်လုို့ ထောက်ပြပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် တနေ့ကမှ မြန်မာနုိုင်ငံခရီးစဉ်ကနေပြန်လာတဲ့ အမေရိကန်အဆင့်မြင့်အရာရှိတဦးဆုိုရင် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆုိုင်တဲ့ အခြားအချက်အလက်အတော်များများကိုထောက်ပြဝေဖန်ခဲ့ပေမဲ့ မြန်မာ အများစုအကြား အငြင်းပွါးနေတဲ့ မဲစာရင်း Voter Lists ကိစ္စကိုတခွန်းမှ ထည့်မပြောခဲ့တာဟာ နုိုင်ငံတကာအစိုးရတွေနဲ့ မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူတွေကြား Focus လုပ်မှု အဓိကကွာဟာချက်ဖြစ်တယ်၊ တနည်းအားဖြင့် အမေရိကန်နဲ့ အီးယူတုို့ဟာ မြန်မာအစိုးရအပေါ် သူတုို့ရဲ့သြဇာပုိုကြီးလာတယ်လို့ ထင်နေပေမဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေကတော့ အမေရိကန်နဲ့ အီးယူကလည်း မြန်မာအစိုးရရဲ့ လှည့်ကွက်ထဲ ခံလုိုက်ရပြန်ပြီဆုိုပြီး မြင်လာနေကြတယ်လို့ သူက ထောက်ပြပါ တယ်။
အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ စကာင်္ပူအပါဝင် မြန်မာသံရုံးတွေမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကြိတင်မဲပေးမှု အမှားအယွင်းတွေ၊ ကော် မရှင်ဥက္ကဌကုိုယ်တုိုင်က မဲစာရင်း ၃၀ ရာခုိုင်နှုန်းပဲ အာမခံနုိုင်မယ်ဆုိုတာတွေဟာ မဲပေးခွင့်ရှိသူ သန်း ၃၀ ကျော်ထဲ က ၁၀ သန်းလောက်ရတဲ့မဲနဲ့ပဲ တုိုင်းပြည်အနာဂတ်ကုိုဆုံးဖြတ်မယ်ဆုိုတဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်နေတယ်၊ တခါ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အကြိုကာလက အစိုးရနဲ့ အတုိုက်ခံတုို့ကြား အသေအချာကြိုတင်ညှိနှိုင်းမှု ရှိခဲ့ပေမဲ့ အခု ၂၀၁၅ မှာ ဒါမျိုးညှိနှိုင်းတာ ဘာကြောင့်မလုပ်ကြတာလဲဆုိုပြီး သူက မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။
လက်ရှိဦးသိန်းစိန်အစုိုးရဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က အများရဲ့ယုံကြည်မှုကိုတစုံတရာရခဲ့ပေမဲ့ အခုနောက်ပုိုင်း တဖြေးဖြေးကျလာနေကြောင်း၊ Facebook မှာ ဓာတ်ပုံ Share တဲ့ သာမန်ပြည်သူတွေကုို ဖမ်းဆီးထောင်ချနေသလုို ကြံ့ခုိုင်ရေးဥက္ကဌလုို အဆင့်မြင့်နေရာတွကုိုလည်း အာဏာသိမ်းဖြုတ်ချတဲ့အထိ တရားဥပဒေစုိုးမုိုးမှု ကင်းမဲ့လာနေ ကြောင်း၊ ဒီလုိုအချိန်မှာ အများပြည်သူက ချစ်ခင်လုို့ ရွေးချယ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကနေ သူတုို့အစိုးရ တရားဝင်မှုကိုရ ဖုို့သိပ် မသေချာတော့ကြောင်း သူက ထောက်ပြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲနည်းအပြင် တခြားနည်းတွေကိုလဲအစိုးရဖက်က ရှာကြံလာကြောင်း၊ အဲဒီထဲမှာ တလောက လက်မှတ်ထုိုးလုိုက်တဲ့ NCA (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကုိုင်တွေနဲ့ အပစ်ရပ်စာချုပ်) နဲ့ မဘသ (အမျိုး ဘာသာစောင့် ရှာက်ရေးအသင်း) လုို အမျိုးသားရေးဝါဒီတွေဆီက အသိမှတ်ပြုမှုမျိုး၊ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရကုို Blank Cheque ပေး ထာမိတဲ့ နုိုင်ငံတကာအစိုးရတွေဖက်က အသိအမှတ်ပြုမှုမျိုးဟာ ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်တဲ့ တခြားနည်းနဲ့ရနုိုင်တဲ့ တရားဝင်မှုမျိုး ဖြစ်လာနုိုင်တယ်လို့ သူက ဆုိုပါတယ်။
လက်ရှိတပ်မတော်ဟာ နုိုင်ငံရေးအရ ပါလီမန်ထဲမှာ ၂၅ ရာခုိုင်နှုန်းယူထားတဲ့အပြင် စစ်အင်အားနဲ့ စစ်ပစ္စည်းအရ လည်း ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတုိုင်ခင်ကထက် တောင် သြဇာ ပိုကြီးလာနေကြောင်း၊ စစ်တပ်ကုိုအဓိကနေရာမှာ ထားပြီး ခရုိုနီစီးပွါးရေးကတဖက်၊ မဘသ လုို အမျိုးဘာသာအစွန်းရောက်တွေ ကတဖက်နဲ့ တြိဂံပုံစံ Iron Triangle အာဏာစနစ်နဲ့ နောက်ထပ် ဆယ်စုနှစ် တခုစာ ဆက်သွားနုိုင်ဖုို့ လက်ရှိအစိုးရနဲ့ စစ်တပ်ဖက်က ကြိုးစားနေတဲ့ အထောက်အထားတွေ သူတွေ့ရှိထားတယ်လို့ ကုိုမင်းဇင်ကပြောပါတယ်။
တခါ NCA ကိစ္စမှာလည်း နုိုင်ငံရေးအရပြေလည်အောင် အဖြေရှာရေးထက် ရွေးကောက်ပွဲမှာရှုံးနုိုမ့်မှုကို ပြန်လည် အဖတ်ဆယ်နုိုင်အောင် တုိုင်းရင်းသားလက်နက်ကုိုင်တွေရဲ့ အားကုိုလုိုချင်တာက ပုိုများနေတဲ့ သဘောမျိုးတွေ့နေရ ကြောင်း၊ အနှစ်သာရအားဖြင့်ဆုိုရင် အရင် ၁၉၉၀ ၀န်းကျင်က ဗုိုလ်ချုပ်ခင်ညွန်တုို့ လုပ်ခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဗျုဟာနဲ့ ဒီနေ့ဗျုဟာ ဘာမှမကွာကြောင်း၊ အရင် မဟာဗျုဟာလေ့လာရေးဌာနက စစ်ယူနီဖောင်းဝတ်နေသူတွေနေရာမှာ အခု အရပ်ဝတ် MPC က၀င်လာပြီး အရင် ဘိန်းနဲ့ရတဲ့ ဘတ်ဂျက်နေရာမှာ အခု နုိုင်ငံတကာအလှူငွေတွေနဲ့ အစား ထုိုးလုိုက်ခြင်းသာ ကွာတယ်လုို့ ကုိုမင်းဇင်ကထောင်ပြပါတယ်။
ဒါကြောင့် စေတနာမမှန်တဲ့ လက်ရှိအစိုးရနဲ့ တပ်မတော်ကုို ပြုပြင်ရေးသမားအစစ်အမှန်တွေဖြစ်တယ်လုို့ ထင်ပြီး Blank Cheque ထပ်ပေးမိတာမျိုးမဖြစ်အောင် နုိုင်ငံတကာအစိုးရတွေဖက်က ဆင်ခြင်ဖုို့ လုိုကြောင်း၊ ပြည်တွင်း- ပြည်ပရှိ မြန်မာတွေကလည်း လက်ရှိအစိုးရရဲ့ ဟန်ဆောင်မှုတွေကို အသေ အချာထောက်ပြပြီး စစ်မှန်တဲ့အပြောင်း အလဲတကယ်ဖြစ်လာအောင် ၀ုိုင်းကြိုးစားဖုို့ လုိုအပ်ကြောင်း၊ နုိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာသာ ဒီမုိုကရေစီ အင်အားစုတွေဖက်က အနုိုင်မရဘူးဆုိုရင် စစ်တပ်ဗဟုိုပြုဝါဒီနဲ့ ဘာသာရေးအစွန်းရောက် အမျိုးသားရေးဝါဒီတွေရဲ့ ဖိနှိပ်မှုကုို ပြန်လည်တွန်းလှန်နုိုင်ဖုို့ အတော့်ကိုခက်ခဲသွားနုိုင်တယ်လုို့ ကုိုမင်းဇင်က ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ ။
(ပထမ ပုံမှအပ ကျန်ဓာတ်ပုံများအားလုံးကုို ကုိုညိုရဲ့ Ko Nyo's Facebook မှ ကူးယူဖေါ်ပြထားပါကြောင်း)။